Gaa diidka dugsiga – Bildung und Teilhabe
Sharaxaada gaadiidka dugsiga
Kani waxaa ku jira qaabilaada in ka badan qarashaadka gaadiidka dugsiga.
Marhore dhameystiray waxbarashada qasabka ah ee waqtiga buuxa
Ka qeybgalo dugsiga guud ama shaqada
Isticmaalo gaadiidka bulshada (baska ama tareenka) oo wadadooda dugsiga ah
Aanan helin wax lacag bixin tababarka ah
Ka yartahay 25 sanno jir
Haddii ardayga uu mar hore dhameystiray waxbarashada qasabka ah (10 sanno dugsi) oo uu ku madaxbanaanyahay baska ama tareenka si ay uga qeybgalaan dugsigooda, kadib qarashka gaadiidka dugsigooda waa laga bixin karaa iyaga.
Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Bus & Bahn (Tareenka iyo Bas-tareenka) : : Foomka ka imaaday “Komm – Mach mit” buuga-jeega, buuxi codsiga, ku lifaaq shahaadada ka qeybgalka dugsiga oo ku soo dir Pro Arbeit.
Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga iyo, haddii la sheego sharuudo hore ee quseeya, kadib tikitka safarka ee dugsiga ayaa la ansixiyaa. Ardayda dugsiga guud ahaan waxay heleen CleverCard ee sannadka dugsiga hadeer. Dacwadaha gaarka ah, xeerar kala duwan ayaa lala ogolaan karaa Maamulahaaaga.